Leicester City oo hoggaanka u qabatay horyaalka Premier League, kaddib markii ay guul ka gaartay kooxda Chelsea… +SAWIRRO – Gool FM
Leicester City oo hoggaanka u qabatay horyaalka Premier League, kaddib markii ay guul ka gaartay kooxda Chelsea… +SAWIRRO
Dajiye January 20, 2021
(England) 20 Jan 2021. Leicester City ayaa garoonkeeda King Power guul kaga gaartay kooxda Chelsea, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada horyaalka Premier League ee dalka England.
Qeybtiii hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Leicester City.
Daqiiqadii 6-aad Leicester City ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay xiddigooda Wilfred Ndidi, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Harvey Barnes.
41 daqiiqo James Maddison ayaa ciyaarta ka dhigay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxdiisa Leicester City, iyadoo uu goolkan uu si qurux badan u caawiyay Marc Albrighton.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 oo ay Leicester City kaga adkaatay kooxda Chelsea oo marti ugu aheyd garoonka King Power, Leicester ayaana si ku meel gaar ah hoggaanka ugu qabatay horyaalka Premier League, iyagoo leh 38 dhibcood waxayna 1 dhibic ka sara mareen Manchester United.
Maguire oo ka hadlay waxa ay Man United u baahan tahay si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League
Horudhac: Manchester City vs Aston Villa… (Sky Blue oo tan iyo 2019 hoggaanka u qaban karta horyaalka Premier League)